U e-pos nhau mabhuku ndiwo chinhu chakakosha pakuvandudza ukama ihwohwo. Zvemagariro ezvemagariro zvinobatsira, asi-ruit chimwe chinhu chinongonyanya kufanana nezvemamerica: zvinowedzera zvemunhu oga, mumwe-pane-mumwe-kurukuro, uye mabhuku ehurukuro (achiripo) iyo nengusiram.
Iwe unonzwisisa izvo "nei" kumashure e-pos tsamba – asi chii nezve "sei"? Ndeipi e-pos e-pos tsamba yekubatsira ichakubatsira zadzisa zvinangwa zvako zveku blogga?
1 Yakanakisa E-pos Tsamba Yekushandisa Services Yako Blog
1.3 3 – Sendinblou
1.6.4 ConvertKit Yakanakisisa julle:
1.7.1 Belangrike kenmerke
Yakanakisa E-pos Tsamba Yekushandisa Services Yako Blog
Nguva Yese Yokubatana iyo e-pos yepepanhau inopa vhizimisi vashoma uye vasiri purofiti.
Yakagadzirwa mu90s, Nguva dzose Kubatana kwave kwakapoteredza kwekanguva. Zinozivikanwa nokuda kwekuzvitsigira kwavanotsigira vatengi, vanoisa pfungwa pakupa vhesi yemashoko e-pos emabhizimisi mashoma uye asina maturo.
Dzidza ZVIMWE – Deurlopende kontakoorsig
E-possjablone van Mazana
Gadzira uye tevera e-handelskoepons
Zviri nyore kushandisa kunyange kana iwe usisiri tech-savvy
Mabhizimisi mashomanana uye zvisina maturo ndeavo vanonyanya kutsvaga vateereri. Kana gebruik u tegnies-vaardige uye kutsigirwa kwefoni ndiyo chinhu chinokosha kwauri, saka Kumbokurukurirana Kungove kunogona kuva sarudzo yakanaka.
Kune zvakawanda zvakawanda kune MailChimp kupfuura mascotte wavo akanaka, Freddy. Ivo ndevamwe vanozivikanwa zvikuru vevhangeri vapeji vanoita chikonzero. MailChimp inozivikanwa nokuda kwekusununguka kwavo kwekushandisa, intuïtiewe koppelvlak, uye yakanaka e-posontwerp.
Buigsame e-posredakteur vir kuruka-uye-drop
E-handel kubatanidzwa (Magento, WooCommerce, 3dcart, nezvimwewo)
Inovakwa-in-analise neGoogle Analytics-kusanganiswa
Imeyili kugadzira zviratidzo pamashizha akasiyana-siyana e-skerm
Yakawedzerwa nuusbriewe oor RSS-na-e-pos pamwe netsika kubatanidza tate
Intuïtiewe koppelvlak iyo iri nyore kune vanotanga kudzidza kudzidza nokukurumidza
Zvizhinji zvemavara, mafoni-vriendelike sjabloon
Buigsame e-posredakteur van nyore-kushandisa-kudhonza-uye yeka – kuchinja zvinhu zvose (fonti, mavara, mazita, nezvimwe) met behulp vanatombozivi
Nzira dzekuisa zviratidzo zvishoma uye dzakaoma kutarisa kana iwe gebruikazivi HTML / CSS
Segmentasie uye outomatisering zvinhu zvakakosha
Ondersoek die chitoro kuburikidza neyechitatu-bato-app
E-handel ndiyo MailChimp inonyanya kukoshesa vateereri, uye ndiyo iyo inopenya chaizvo. Kana uri kutengesa chigadzirwa chemutambo paIndaneti, MailChimp inofanirwa iwe. MailChimp stuur net ‘n e-pos met ‘n e-pos met ‘n kaartkaart vir ‘n kaart en ‘n RSS-weergawe ‘wat u kan bekostig om dit te bekragtig (yakasununguka pasi pevanyori ve2000!). MailChimp bied ‘n RSS-veldtog aan.
3 – Sendinblou
Sendinblue chishandiso chishandiso chinopa simba SMB’s kuti vataure uye vakure mupuratifomu imwe neemail, SMS, automatisering van kushambadzira, CRM, chat uye zvimwe.
Intuïtief Drag uye Drop e-posadres
Kushambadzira kweSMS uye autoresponder mameseji
Real-nguva analytics neinodzvara mepu, GA kubatanidzwa
CRM uye Chat
Isina muganho wekuchengetedza
Kubatanidzwa netungamira ekugadzirwa kwezvinhu, CMS uye e-handel mapuratifomu
Multi-mushandisi-rekening inowanikwa chete paPrimum uye Enterprise chirongwa
Kunyangwe iwe uri kungotanga kunze kana kujairira kushambadzira e-pos, kana iwe uchitsvaga robuuste sagteware, rutsigiro rwakasimba, uye kukosha kwakanyanya kwemari, tarisa Sendinblue.
AWeber ndeimwe yezvinyorwa zvakanyatsozivikanwa uye zvakanyatsozivikanwa zvemashoko e-pos.
Yakatangwa mu1998, AWeber ndeimwe yevanonyanya kuzivikanwa neveji vapeji vema e-pos. Vanozivikanwa nokuda kwezvinhu zvavo zvakasimba, vanopa muedzo usingabhadhari uye mari yekuchengetedza mari.
Proaktiewe gemorspos vir optimale aflewering
Kunyatsotaura uye analytics; rakakura kune mabhizinesi ane chido chekuchengeta nhengo dzeboka rese paneel imwecheteji peji
Buigsaam: Kuenzanisa kwakanaka pakati pekushandiswa kwekushandiswa, uye zvakagadzirwa zvakanaka
Basa rakanaka revatengi kuburikidza nefoni, live chat, kana e-pos
Segmentasie haina kunyatsogadziriswa. Vanyoresa vanoverengerwa kakawanda kana vari pamatanda akawanda – izvo zvinogona kutengesa kutengesa kwako.
Segmentasie inokosha zvikuru. Iwe haugoni kugovera zvikamu zvekubhadhara zvakabva ruit zvavanoita.
Ek stuur ‘n e-pos aan u aan u mukurumbira wekusava kushandisa-ushamwari.
GetResponse yakashandiswa kuva chigadziro chedu chekusarudza pano pa WHSR yeiyo makore 2 apfuura. Unogona kuona Jerry se Ongororo yeGeResponse-pano.)
Outomatisering: chengetedza mazita e-pos nekunyorera, kutengesa, mazuva ekuzvarwa, nezvimwe.
Toni dzekunyora fomu ma templates, kusanganisira kunze kwezvinangwa pop-ups, kupfura fomu, skud bhokisi, nezvimwewo.
Kuongorora kweA / B ne-zvakadzama analytics
Groot-in-een-stelsel yekuvaka tsamba yako yeimeri, kusanganisira mapeji ekumhanyira uye marudzi ese e-opt-in
Kunyanya kuparadzanisa kuparadzanisa kuedza uye nhengo dzekubika kuti uwedzere kuwandisa kwema e-pos yako
Vatengesi veDhijitori, kunyanya vanozvitsaurira vatengesi veimeri, avo vanoda mabasa epamberi vanogona kuwana zvose zvavanoda neGreeResponse. Kana iwe uchida kubata zvinhu zvose munzvimbo imwe (mapeji ekutambisa, webinars, analytics, nezvimwewo) edzai muedzo met gebruikmaking vanabhadhari kuona kana GetResponse yakakunakira iwe.
ConvertKit inopa e-pos kutengesa kwepro bloggers in segmentasie yakakura uye outomatisering.
Yakagadzirwa mu2013, ConvertKit ndiyo mwana mutsva pachigamba, asi ivo vakanyatsopisa kusvika zvino uye vachiri kukura nokukurumidza. Muvambi weruzivo blogger uyo anogadzira uye anotengesa zvigadzirwa zvake, uye akasika ConvertKit yevateereri vakafanana. Zvakagadzirirwa kubatsira mablogiki kuti agadzire mazita e-pos uye kukonzera mishandirapamwe kuitira kuwedzera kutengesa pavanotanga chigadzirwa kana basa.
Pandakabvunza boka revana vebhizimisi rebhizimisi to vhidhiyo yemupepeti yavakashandisa, vazhinji vakanga vachifara mubatsigiro ravo reConvertKit:
Convertkit ROCKS kana iwe uine mishonga yakawanda inomhanya panguva imwe chete kana une nzira dzakasiyana-siyana munhu angangopinda mazita ako e-pos. Kushandiswa kweTyggers uye Tags muConvertkit [inoita] iyo yakanyanya nyore kuti ibatsire vatengi vako kufamba nenzira yevatengi pasina kukanganisa kwekombiyiti inowana e-pos en inotarisirwa kuti ive netariro. Marissa Stone yaSimon Says Social.
Marissa Stone yaSimon Says Social.
Ini ndaive neMaChChimp kwenguva yakareba – ini ndakave nemukurumbira saka yaive nemahara outomatisering ens. Zvaive zvakanaka kusvika ndazvishandisa kumhanyisa kosi. Ini ndaive nezvakawanda nyaya dzekuwana vanhu ruit chaicho chinyorwa, nyaya kumisa kana kutanga kutumira munhu, uye kana ndaida kutamisa munhu kubva ruit imwe runyorwa kuenda kune mumwe kana handmatig kuwedzera mumwe munhu zvakanditora zvose. Ndakaona kuti ndanga ndiri kushandisa hafu yeawa kana zvakadaro mazuva mashoma rega rega kungoita chokwadi chekuti zvinhu zvave kushanda. Ndakaenda kuConvertkit uye ndinonyatsoida. Zvakanditorera anenge 15 maminetsi ekudzokorora yangu 30 zuva e-pos rondedzero uye kuunza runyorwa rwangu zvaive nyore uye mutambo wakasununguka. Super inofara kubhadhara kune chimwe chinhu chandinovimba nacho – chikuru kuziva kuti chinoshanda chete. Helen Stringfellow van Equilateral Design Studio
Chikamu uye kuronga vatsigiri nematekisi
Analytics, kusanganisira kutendeuka kwehutano pamunhu oga-mafomu
Intuïtiewe koppelvlak en ‘n nuwe weergawe
Zviri nyore kuronga kunyange kunyorwa kwakaoma zvikuru nevanyori
Ndiyo chete muteveri wekutengesa e-pos kuti ave neGumroad inobatanidzwa
Iwe unogona kugadzira mazita akasiyana-siyana e-opt-in uye maharabvu kune rimwe runyoro (huru yekushandisa inhoud-opdaterings)
Iwe haugoni kuronga hurongwa hwekutanga pazuva remangwana
Iyo mhariri julle e-pos inonyanya kukosha: haugone kuchinja mavara / mavara / mavara pamai e-pos pasina kushandisa code
ConvertKit Yakanakisisa julle:
ConvertKit yakanyatsorongedzerwa kuva bloggers uye vatengesi vedijitori avo vanoda kutengesa zvinhu zvavo pachavo nemashandiro. Kana iwe uchida kukwanisa kuendesa e-pos, ita misangano yakakomberedzwa kana vateereri sezvikamu, nezvimwewo, ipapo ConvertKit ndewewe.
Omnisend kukweretesa-paneel ako chiteshi nzira kuita kupfuura kutumira tsamba.
Kana yasvika nguva yekupedza kubva nyore e-pos tsamba dzekutumira kune omnichannel yekushambadzira outomatisering, Omnisend iripo yekupa simba eCommerce vatengesi. Yaimbova inonakidza kumusoro uye comer, Omnisend akave akajeka nzvimbo mune eCommerce yekushambadzira indasitiri nekutora e-pos kushambadzira chinhanho chinowedzera kupa yakasarudzika kuonana ne e-handelaars.
Riri nyore-kushandisa ekuona stuur ‘n e-pos aan anovakira
Slim segmentering yeiyo hyper-chaiyo yekutarisa
Bata rekubata zvishandiso zvinosanganisira pop-ups, zvimiro zvetsika, mapeji ekutakura, uye ine simba Wheel yeForune fomu
Kuvavarira kunoenderana nemafambiro ekutenga, kuita mushandirapamwe, uye data dhata
Vavaki vanoona yezvinhu zvese zvekushambadzira nehunyanzvi matemplate kukubatsira kuti utange
Huya necannels dzako pasi padenga rimwechete: Facebook Messenger, e-pos, SMS, web push kennisgewings, WhatsApp, Viber, nezvimwe
Kyk na panzvimbo-ruitmashoma
Iyi puratifomu ndeye chero munhu anotengesa aanlyn uye anofanirwa kuvaka hukama huri nani nevatengi vavo. Kana iri nguva yekukwira kumusoro kubva nyore tsamba yekutsanangudza kusvika kune omnichannel yekushambadza outomatisering, Omnisend ndiyo sarudzo yakanakira iwe.
Wanga uri kuvhara kutanga yako e-pos yepaibhuku nokuti iwe hauzive kuti ndiani anopa mudzidzi angashandisa? Vose vemazano ari pamusoro apa vakanaka, uye vazhinji vavo vanopa muedzo met behulp vanabhadhari kana kunyange nehutano hwebasa.
Usarega kutanga mazita ako zvakare – edza imwe yeiyi yepa e-pos verskaffers van e-pos uye tanga kutanga kuvaka urongwa hwako nhasi!
Hazvina mhosva kuti zvikonzero zvipi kutanga bhuku، kuverenga vaverengi kuverenga chinyorwa inongova danho rokutanga.
Hazvina mhosva kuti zvikonzero zvipi kutanga bhuku，kuverenga vaverengi kuverenga chinyorwa inongova danho rokutanga。 Ndizvo